မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသင့်တော်ဆုံး ငွေလွှဲနှုန်းထားဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်နေသည့် M-Pitesan အကြောင်းလေ့လာခြင်း | Mizzima Myanmar News and Insight
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသင့်တော်ဆုံး ငွေလွှဲနှုန်းထားဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်နေသည့် M-Pitesan အကြောင်းလေ့လာခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွေမှာ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုကလည်း ကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ ပါဝင်နေပါတယ်။ မိသားစုဝင်တွေ ဒါမှမဟုတ် မိမိချစ်ခင်ရသူတွေရဲ့ ကျောင်းလခ၊ ဆေးဖိုးဝါးခတွေကို ကူညီပေးဖို့၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် ငွေပေးချေဖို့၊ အိမ်အသုံးစရိတ်တွေပေးချေဖို့၊ လက်ဆောင်ပေးဖို့၊ လှူဒါန်းဖို့ စတဲ့ အကြောင်းအရာမျိုးစုံအတွက် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတွေကို တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန် ကျွန်တော်တို့အားလုံးနီးပါး လုပ်ဆောင်နေကြရပါတယ်။ ဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးကြောင့် ငွေလွှဲတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ အသက်သာဆုံးနဲ့ အဆင်အပြေဆုံး ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုကိုသာ အသုံးပြုလိုကြတယ်ဆိုတာကလည်း အသေအချာပါပဲ။
စျေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ မိုဘိုင်းငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုတွေထဲမှာ အူရီဒူးရဲ့ M-Pitesan ဟာ အလွန် သက်သာတဲ့ ငွေလွှဲနှုန်းထားတွေနဲ့ လွယ်ကူစိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ M-Pitesan နဲ့ဆိုရင် ငွေလွှဲတာ၊ ငွေလွှဲရယူတာ၊ ဖုန်းငွေဖြည့်တာနဲ့ ငွေပေးချေတာစတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို နေရာမရွေး၊ အချိန်မရွေး၊ ဖုန်းထဲကနေတစ်ဆင့် လုံခြုံမှုအပြည့်နဲ့ အလွယ်တကူ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သုံးစွဲသူတွေအတွက် အရမ်းကိုအဆင်ပြေစေမှာပါ။
M-Pitesan နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိထားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာအချို့ကို အားလုံးပဲ ဗဟုသုတ ရရှိအောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ များများလွှဲလေ၊ များများသက်သာလေ
M-Pitesan ကို အသုံးပြုပြီး ငွေများများလွှဲလေ၊ ငွေလွှဲခ ပိုသက်သာလေ ဖြစ်လို့ မလိုအပ်ပဲ ငွေကြေး အပိုကုန်ကျတာတွေကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ M-Pitesan ကို အသုံးပြုပြီးတော့ ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်အထိ ငွေလွှဲခြင်းအတွက် ငွေလွှဲခ အများဆုံး ၂,၅၀၀ ကျပ်သာ ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပြီး အခြားမိုဘိုင်းငွေလွှဲ ဝန်ဆောင်မှုတွေနှင့် ယှဉ်မယ်ဆိုရင် ၂ ဆလောက် ပိုသက်သာပါတယ်။ ဒါကြောင့် M-Pitesan ကိုသုံးပြီး ငွေများများလွှဲလေ၊ အပိုကုန်ကျမယ့် ငွေလွှဲခတွေကို များများချွေတာနိုင်လေ ဖြစ်မှာပါ။
၂။ M-Pitesan Wallet ဆိုတာဘာလဲ? ဘယ်လိုရယူနိုင်မလဲ?
M-Pitesan Wallet ဆိုတာ မိုဘိုင်းဒီဂျစ်တယ် ပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ပုံမှန် ပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခု လိုပါပဲ။ အူရီဒူးဆင်းကတ်ကို အသုံးပြုပြီး M-Pitesan ဝန်ဆောင်မှုကို စာရင်းသွင်းလိုက်တာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် M-Pitesan Wallet ကို ရယူနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ M-Pitesan ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ဆိုတာကလည်း M-Pitesan အက်ပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုပ်ရယူပြီး အဲဒီကနေတဆင့် M-Pitesan Wallet ကို စာရင်းပေးသွင်းလိုက်ဖို့ပဲ လိုတာပါ။ နောက်ပြီး အခြားဆင်းမ်ကတ်တွေကို အသုံးပြုသူတွေ အနေနဲ့လည်း နီးစပ်ရာ M-Pitesan ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေတဆင့် ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုတွေကို အလွယ်တကူရယူသွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး M-Pitesan Wallet နဲ့ ပြုလုပ်တဲ့ ငွေလွှဲလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကို ကိုယ်ပိုင်လျှို့ဝှက်နံပါတ်နဲ့ လုံခြုံစိတ်ချစွာ အသုံးပြု သွားနိုင်မှာပါ။
၃။ M-Pitesan ကိုအသုံးပြုပြီး ဘယ်လိုငွေပေးချေမှုတွေကို လုပ်ဆောင်နို်င်မှာလဲ?
M-Pitesan ကိုအသုံးပြုပြီး ငွေပေးချေမှု ပုံစံမျိုးစုံကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
သူငယ်ချင်း၊ မိသားစု၊ စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များဆီကို ငွေလွှဲနိုင်ခြင်း
ရုပ်သံလိုင်းတွေအတွက် စာရင်းပေးသွင်းခနဲ့ မီတာခ အစရှိတဲ့ လစဉ် အခကြေးငွေတွေကို ပေးဆောင် နိုင်ခြင်း
M-Pitesan ကို အသုံးပြုပြီး ကုန်ပစ္စည်းအသုံးအဆောင်တွေကို ဝယ်ယူနိုင်ခြင်း
Gift cards တွေကို ဝယ်ယူနိုင်ခြင်း
စတဲ့ ငွေပေးချေမှုတွေကို အလွယ်တကူ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
၄။ M-Pitesan ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာဘာလဲ? ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ဘယ်မှာ ရှာလို့ရနိုင်မလဲ?
မိမိနဲ့ အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ M-Pitesan ကိုယ်စားလှယ်တွေကို သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ 234 ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးတော့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ် အူရီဒူး မြန်မာရဲ့ website ကနေပဲ ဖြစ်ဖြစ် အလွယ်တကူ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ မိမိအနီးအနားမှာရှိတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ကို ရှာတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ အဲဒီကိုယ်စားလှယ် ကနေတဆင့် ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုတွေကို စတင်ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အပြင် M-Pitesan Wallet မှာ ပါဝင်တဲ့ ငွေလွှဲခြင်း၊ ငွေသွင်းခြင်း၊ ငွေထုတ်ခြင်း စတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိရှိလိုတာတွေကိုလည်း မေးမြန်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မတူညီတဲ့ နေရာဒေသတွေမှာ နေထိုင်နေကြတဲ့ ချစ်ခင်ရသူတွေဆီကို ငွေလွှဲဖို့၊ ဒါမှမဟုတ် အခြားကျသင့်ငွေတွေကို ပေးဆောင်ဖို့ဆိုတာက ခက်ခဲပြီး ငွေကုန်ကြေးကျ မများသင့်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ငွေလွှဲခသက်သာပြီး ပိုမိုအဆင်ပြေ မြန်ဆန်တဲ့ M-Pitesan ရဲဲ့ အားသာချက်တွေကို သိရှိ နားလည်ထားတယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အားလုံးအတွက် အကျိုးရှိစေမှာပါ။
ရုရှမှာ တောမီးကြောင့် စစ်လက်နက်ဂိုထောင် မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်
အင်ဒိုနီးရှားမှာ ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း စိတ်ဝေဒနာရှင်တွေကို သံကြိုးတွေနဲ့...
ပြည်ဘူတာကြီးအပါအဝင် မီးရထားဝန်းရှိ နေရာ ၃ခုကို အသွားအလာကန့်သတ်
မန္တလေးမှာ အသက် ၆၀ နှစ်နဲ့အထက်တွေ ကြိုတင်မဲပေးဖို့ စာရင်း စကောက်
မတ်လမှစ၍ ထိုင်းမှ ပြန်ဝင်လာသူ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ၁၂၀၀၀၀ ကျော်ရ...
လေးပွင့်ဆိုင်လုံခြုံရေးဆွေးနွေးပွဲ Quad က အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်ဟု...